Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कक्षा १२ काे नतिजा : कसैको आएन जीपीए ४ – Emountain TV
कक्षा १२ काे नतिजा : कसैको आएन जीपीए ४
काठमाडौं, १४ साउन । कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट जीपीए ४.०० कसैको पनि आउन सकेन । ३ हजार ६७ जना विद्यार्थीले उच्च तह ३.६१ देखि माथिको जीपीए ल्याएका छन् ।
उच्च तहको अंक ल्याउने समूहअन्तर्गत ४ जीपीए प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या शून्य रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
कक्षा १२ को वैशाखमा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक शर्माका अनुसार गत वर्षमा जस्तै यसपालि मध्यमस्तरको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सबभन्दा बढी छ । परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिकतर्फ गरी ४ लाख २८ हजार ६७ परीक्षार्थी सहभागी थिए । नियमिततर्फ २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ परीक्षार्थी थिए । गतवर्ष कक्षा ११ को परीक्षामा एक विद्यार्थीले मात्र उत्कृष्ट ४.०० जीपीए ल्याएका थिए ।
कक्षा १२ मा उच्च जीपीए (३.६१–४.००) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष नियमिततर्फका २ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा उक्त समूहको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ हजार १ सय ६९ जना मात्र थियो ।
यस पटक ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १६ हजार २ सय ४ छ । ३१ हजार ६२ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । २.४१ देखि २.८० जीपीए ल्याउनेको संख्या ५६ हजार ५ सय ३ जना छ । २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ८६ हजार २ सय २७ जना छन् । यो मध्यमस्तरको जीपीए हो । १.६१ देखि २.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ६२ हजार ६ सय १९ जना छन् । १.२१ देखि १.६० प्राप्त गर्नेको संख्या १९ हजार ५ सय ८५ छ भने ०.८१ देखि १.२० ल्याउने परीक्षार्थी ३ हजार ५ सय २४ जना छन् । सबभन्दा कमस्तरको ०.० देखि ०.८० ल्याउने विद्यार्थी १३ हजार ३ सय ६२ जना छन् । बोर्डले ९ वटा समूहमा ग्रेडअनुसार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
मङ्गलबार, १४ साउन २०७६
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचिएको भिडियो सार्वजनिक
शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रवि लामिछानेसहित ३ जना पक्राउ
वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार मदनमणि दीक्षितको ९७ वर्षको उमेरमा निधन
वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको बिद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्यष्टि
बझाङ्गको सदरमुकाम चैनपुरमै खानेपानीको हाहाकार
कहिले हुन्छ जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य ?
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक संसदमा अड्किए
बागमती पीडितले अझै पाएनन् न्याय चार महिनादेखि धर्ना